Sketchiography – Min Thayt
Book Review Literature Sketchiography
လူထုဒေါ်အမာ၊ မန္တလေးသူ မန္တလေးသားများကြီးပွားရေးစာအုပ်တိုက်၊ ဒုတိယအကြိမ်။၂၀၁၉ ၊ ဧပြီလ။မန္တလေးသူ မန္တလေးသားတို့၏ ရုပ်ပုံလွှာများ။ လူထုဒေါ်အမာရေးမှ၊ မန္တလေးသားတစ်ယောက် မန္တလေးအကြောင်း ကောင်းကောင်းကန်းကန်း သိရသည်။ မန္တလေးပထဝီအရ ရေးဖွဲ့သည်များ ရှိသလို၊ မင်းနေပြည်တော်ဖြစ်သည့်အတွက် မြို့ပြလူနေမှုသဘော ရေးတာတွေ လည်း ဖတ်ဖူးသည်။ ယခု လူထုဒေါ်အမာ၏ မန္တလေးသူ မန္တလေးသားများ စာအုပ်မှာ၊ ရုပ်ပုံလွှာများဟု ပြောနိုင်ပါ သည်။ ပြောရပါမည်။...
Articles Literature Papers Perspective Politics Sketchiography
Min Thayt November 14, 2021 November 14, 2021
နောက်ကြောင်းပြန်အရေး သတိပေးချက် ကျော်ဝင်းဟာ ဘယ်လိုအရာတွေကို ဇောင်းပေးပြောခဲ့ပါသလဲ။ ကျော်ဝင်းဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူး ပြောင်းရေးနည်းနာဖြစ်စဉ်၊ ဖြစ်အင်တွေကို ဇောင်းပေးပြောခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လစ်ဘရယ်စိတ်အခံ ထုထည် ကြီးမားလာအောင် သူ့ကလောင်နဲ့ ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဓလေ့အရ အစွန်းရောက်ဓလေ့ဟာ လစ်ဘရယ်စိတ်အခံနဲ့ ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကို တတ်နိုင်သရွေ့ ပြန်ဆွဲတင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ရယ်ဒီကယ်ချောက်ကမ်းပါးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ကျော်ဝင်းဟာ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးတွေမှာ...
Articles Literature Perspective Sketchiography
(စာရေးတာကို တာဝန်တစ်ခုလို သဘောထားပါ) မန္တလေးစာပေမျိုးဆက် (၄) ဆက်မှာတွေ့ရတဲ့ စာရေးခြင်းစိတ်ဇော ဘယ်လောက်ထက်သန်သလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။လူထုဒေါ်အမာ၊လူထုစိန်ဝင်း၊ဒေါက်တာခင်သစ်နှင်း၊ထို့နောက်….. လူထုရေမြေ လူထုဒေါ်အမာ (၁၉၁၅ - ၂၀၀၈) နဲ့ လူထုစိန်ဝင်း (၁၉၄၀ - ၂၀၁၂)တို့မှာ တူတဲ့အချက် တစ်ခုရှိတယ်။ အမေမာရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ရင် ရိုးရိုးနဲ့ သိပ်သွက်တာပဲ။ ဖတ်ရတဲ့သူမှာ တောင့်နေတယ်၊...
Literature Papers Politics Sketchiography
ကျော်ဝင်းလေ့လာချက်ကို စာအုပ်တစ်အုပ်အနေနဲ့ သီးသန့် လုံးချင်းတစ်အုပ်ရေးနေပါတယ်။ အခုစာဟာ တည်ပြီးသလောက် နိဒါန်းအစဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနနည်းအားဖြင့် ချည်းကပ်ရေးသားဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အပိုင်း (၃) ပိုင်းပါဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) ကျော်ဝင်းရဲ့ ဘဝ (၂) ကျော်ဝင်းရဲ့ စာပေပိုင်းလေ့လာချက် (၃) ကျော်ဝင်းရဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်ဆန်းစစ်ချက်။ ဒီနေရာမှာ - (ဆရာ) ကျော်ဝင်းလို့ မသုံးနှုန်းပါ။ ဒါဟာ သုတေသနနည်းအားဖြင့်...
▣ သင်္ကေတဗေဒထဲက အောင်ဆန်းစုကြည်
• ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သင်္ကေတ အဖြစ် ပြောင်း၍ ကျေးဇူးပြုမည်လော။• လူထုမှတ်ဉာဏ် (Public Memory) ထဲမှာ စွဲမြဲ နစ်ဝင်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍမှာ လူထုကို ဆက်လက် ကျေးဇူးပြု ဦးဆောင်နေအုံးမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင် အနာဂတ် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ၊ သူ့ရဲ့ ဩဇာ ဘယ်လို ပုံပြောင်းဖြစ် တည်မလဲဆိုတာဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအိုက်ကွန်...
Articles Literature Sketchiography
▣ လူမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ဦးလှ
မန္တလေးမှာ၊ လူထုမောင်နှံ ရှိတယ်။ လူထုဦးလှနဲ့ လူထုဒေါ်အမာ ဖြစ်တယ်။ လူထုဦးလှ (၁၉၁၀ - ၁၉၈၂)ဟာ မန္တလေးသား မဟုတ်ဘူး။ ပဲခူးတိုင်း ညောင်လေးပင်သား။ ရန်ကုန်မှာ ကြီးပွားရေးအသင်းထောင်ရင်း၊ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသူ အမာနဲ့ တွေ့တယ်။ သျှောင်နောက် ဆံထုံးမပါဘဲနဲ့ ဆံထုံးနောက် သျှောင်ပါလာတယ်။ မန္တလေးသူ ဒေါ်အမာနောက်ကို ဦးလှလိုက်လာတယ်။ မန္တလေးသားတွေက ဘယ်လောက်တောင် ဇာတိမာန်အားကြီးသလဲဆိုရင်၊...
ဦးဝိစာရ (သို့မဟုတ်) အာဏာဖီဆန်ရေး၏ သင်္ကေတ၊ တော်လှန်သော သတ္တိရှေ့ဆောင်
ဆရာတော် ဦးဝိစာရကို ဆရာတော် ဦးဥတ္တမထက် ပိုပြီး ထင်ရှားလူသိများစေတဲ့အရာတွေ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့၊ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမဟာ ဆရာတော် ဦးဝိစာရရဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းပြ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဆရာတော် ဦးဝိစာရဟာ ထောင်တွင်းမှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုနဲ့ ထင်ရှားပါတယ်။ ကိုလိုနီအစိုးရကို အာဏာဖီဆန်တဲ့နေရာမှာ၊ အဆုံးစွန်ဆုံးအထိ မလျော့သောဇွဲနပဲနဲ့ အာခံမှုဟာ ပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့် ဦးဝိစာရကို လူအများက ပိုပြီး သတိရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။...
ရခိုင်လူမျိုး ဗမာ့ဝံသာနုနိုင်ငံရေးရှေ့ဆောင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမဟာ ရခိုင်လူမျိုး ပညာတတ် ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဥတ္တမဟာ သာမန်ပညာတတ် ရဟန်းတစ်ပါး မဟုတ်ပါဘူး။ ပါဠိ ပိဋကတ်ကိုသာ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ရဟန်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်။ ပါဠိ ပိဋကတ်ကိုလည်း ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်တယ်။ နိုင်ငံတကာကို ခရီးသွားလာ၊ လှည့်ပတ်ပြီးတော့ အထွေထွေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ဘာသာရေး အခြေအနေတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်သဘောပေါက်ထားတဲ့...